प्रधानमन्त्री ओलीका उपलब्धि - Khabarpashchimeli
प्रधानमन्त्रीलाई लाग्दैमा रातारात योजना बन्ने, भटाभट ठेक्का लाग्ने र एकाबिहानै शिलान्यास गर्ने भन्ने हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो नौटंकी गर्ने छुट र हावामा विकास बजेट उडाउने अधिकार हुन्छ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षको उपलब्धि नागरिकलाई बताउन वैशाख १ गते देशबासीलाई सम्बोधन गरे। सरकार प्रमुखले आफूले आवश्यक ठानेमा जुनकुनै बेला यस्तो सम्बोधन गर्ने चलन छ। खासगरी विशेष महत्व लागेका सन्दर्भमा देशबासीलाई सम्बोधन गर्ने हो। तर प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना हरेक कामलाई महत्वपूणर् ठान्छन् र बेलाबखत यस्तो सम्बोधन उनका लागि स्वाभाविक हो। तर नागरिकले प्रधानमन्त्रीले साँच्चै केही गर्नका लागि सम्बोधन गर्न लागे होलान् भनेर कान थाप्नुपर्ने अवस्था पनि होइन। वर्ष २०७७ लाई उनले सफलताको वर्षका रूपमा व्याख्या गर्न हरेक कसरत गरे। उपलब्धिविना कुर्सीमा बस्नु हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा समेत उनले यसो गरेका होलान्।
उनले कोरोना भाइरसको महामारी र राजनीतिक अस्थिरताबीच पनि वर्ष २०७७ सफलताको वर्ष रहेको उद्घोष गरे। विश्वका धेरै नेताले यो वर्ष केही गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै आएका छन्। एमालेको घोषणापत्रलाई आधार मान्ने हो भने विकासको दोहोरो अंक कायम गर्ने अवधि प्रधानमन्त्रीले गुजारिसकेका छन्। मुलुकमा २ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएको छ र प्रधानमन्त्री गर्वका साथ घोषणा गर्दैछन्- यो वर्ष सफलताको वर्ष रह्यो। शोकलाई शक्तिमा बदल्ने भने जस्तै दुःखमा रमाउनका लागि शायद प्रधानमन्त्रीले सफलताका केही टिप्स सुनाएका पनि हुनसक्छन्। प्रधानमन्त्रीले मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा ल्याउनुलाई सफलताको प्राथमिक सूचीमा राखेका छन्। सबैलाई थाहा छ, आयोजना प्रारम्भको बाइसौंँ वर्षमा मेलम्ची आयोजना आंशिकरूपमा पूरा भएके छ। यसको हेडवर्क बनेकै छैन। सिमेन्टको बोरामा बालुवा हालेर बनाइएको बाँधका भरमा पानी राजधानी आएको छ। ओली प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा सरकारले भनेको थियो- छ महिनाभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउनेछ। त्यस्ता छ वटा छ महिना बितेपछि पानी आयो। तर यसका पछाडिका खेलको हिसाबकिताब नागरिकले थाहा पाएको छैन। काम गरिरहेको कम्पनीले गरेको क्षतिपूर्तिको मागलाई बेवास्ता गरेर नयाँ कम्पनी भित्र्याउने खेलमा मुलुकले क्षतिपूर्ति भन्दा थप तेब्बर लगानी गर्नुपरेको पाटोको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिन बाँकी नै छ।
कोरोना भाइरसका बेला नागरिकको ज्यान बचाउने काम सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्रीले उपलब्धि भनेर व्याख्या गरेका छन्। यो काम हरेक देशका सरकारले गरे तर यसलाई उपलब्धि ठानेनन्। पीडा र क्षतिका रूपमा लिए। संसद्मा उभिएर प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए- एक जनालाई पनि मर्न दिइने छैन। बेसार पानी खाने र हाच्छिउँ गर्ने ओखती सिकाएका प्रधानमन्त्रीले कोरोनासम्बन्धी उपकरण खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको जवाफ शायद दिने छैनन्। भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मन्त्रीले मन्त्रालयबाट सरुवा पाए। नैतिक आधारमा कार्बाही गरिएन बरु ढाकछोपमा प्रधानमन्त्री एक कदम अगाडि सरे। कमिसनकै चक्करमा समयमा उपकरणहरू आइनपुग्दा भएको नागरिकको मृत्यु सरकारको पहिलो प्राथमिकताको कारण थियो ? सरकारी रेकर्ड मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि लगभग २५ सय नागरिकको मृत्यु कोरोनाकै कारण भएको छ। विश्व नै दोहोरिएर लकडाउनमा फर्कँदै गर्दा आज नागरिकको ज्यान बचाएको भनेर गर्व गर्ने बेला हो यो ?
सरकारको उपलब्धिको अर्को शृंखलामा पार्क, मिटिङ हल, ध्यान केन्द्र, संसद् भवन निर्माण परेका छन्। कोभिड-१९ को प्रकोपका कारण हात मुख जोर्न नपाउने गरी रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई सरकारले के गर्‍यो ? के पार्क बनाउन नागरिकलाई रोजगारी दिएर सरकारले सफलता हात लगाएको हो? धरहरा निर्माण नसकिँदै उद्घाटनका लागि लालायित प्रधानमन्त्रीले धरहरा यो वर्ष बन्न नसकेको भए मुलुकलाई कस्तो क्षति पुग्थ्यो, पक्कै विश्लेषण गर्नेछन् तर लगानीकर्ताहरू डुबिरहेका बेला उनीहरूलाई राहत दिने कस्ता कार्यक्रम आए भनेर व्याख्या गर्न सकेका भए उपलब्धिका रूपमा लिन पनि सकिन्थ्यो। तर आँकडामा रमाएर उपलब्धिको व्याख्या गरिरहँदा नागरिकले प्रधानमन्त्रीलाई कुनरूपमा पत्याउने ?
प्रधानमन्त्रीका दीर्घकालीन सोच र त्यसअनुरूपका योजना हुन सक्छन्। प्रधानमन्त्री मुलुकको कार्यकारी हुनुको नाताले योजना माग्ने र नीति नाएर कार्यक्रममा राख्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्रधानमन्त्रीकै हुन्छ। नागरिकलाई तत्काल राहत दिने अल्पकालीन योजना र देशलाई कुनै स्तरमा पुर्‍याउन दीर्घकालीन योजना आवश्यक हुन्छ। यो सरकारले पनि नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुक बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यो सरकारको दूरदृष्टि हो र मुलुकको भावी नीति हो। यसै आधारमा दीर्घकालीन योजना र कार्यक्रम बनाइनुपर्छ। तर विधि र प्रक्रियाबाहिर रहेर सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने कार्यक्रमले सरकारलाई बदनाम त गराउँछ नै, मुलुकको विकासको निरन्तरको गतिलाई पनि ओझेलमा पारिदिन्छ। कतिपय सन्दर्भमा अवरुद्ध नै गरिदिन्छ। फजुल खर्च बढ्छ र सीमित स्वार्थी वर्गले फाइदा लिन्छ। आज उपलब्धिका नाममा जे व्याख्या भइरहेको छ, केवल सस्तो लोकप्रियताका लागि भइरहेको छ। आसेपासेलाई पोस्ने योजना र कार्यक्रममा खर्च भइराखेको छ। एकैपटक धेरै कमिसन खाने नियत देखापरेको छ। नागरिक दैनिकबाट साभार ।